Amazon Music HD အခမဲ့သုံးလကမ်းလှမ်းချက်သည်ယနေ့တွင်ပြီးဆုံးပြီ
Ignacio Sala | | အခမဲ့ဂီတ, လွှ
လအနည်းငယ်အကြာအထိအသုံးပြုသူများသည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် streaming ဂီတကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါ ဒီရေကတဆင့်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Amazon Music HD သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည် Spotify HD ကို, streaming ဂီတကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အရည်အသွေးမြင့်ဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှု။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Amazon မှလွှင့်ထားသောဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကိုထုတ်လွှင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် Prime ကိုအသုံးပြုသူများ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အခမဲ့သုံးလအတွက်အားသာချက်ယူပါ နှင့် Non- ချုပ်အသုံးပြုသူများသည် 1 လ။ ဒီကမ်းလှမ်းချက် ဒီနေ့မတ်လ ၁ ရက် ၂၃:၅၉ ကိုအဆုံးသတ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံမှာသာရနိုင်သည် အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်။
1 အမေဇုံဂီတ, HD
Amazon Music HD သည်သီချင်းပေါင်းသန်း ၇၀ ကျော်ကိုမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတေးရေးဆရာအဖြစ်ပျော်ရွှင်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်အရည်အသွေးများစွာဖြင့်၎င်းတို့အနက်မှအတော်များများကိုစုံလင်စွာပေးထားသည်။ အသံသွင်းထားသောစတူဒီယိုတွင်အသံသွင်းခြင်းဖြင့်ဂီတကိုပconိသန္ဓေယူခဲ့သည်.
တေးဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုများကအမြင့်ဆုံး ၃၂၀ kbps အထိပေးနိုင်ပြီး Amazon Music HD က ၈၅၀ kbps အထိရနိုင်သည် စံချိန်တင် streaming ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးသုံးဆဌ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောလျှင် 3.730 kHz, 24 bits နှင့် 192 kHz အထိပြောရန်လိုသည်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့, သင်ရုံရှိသည် ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ ကိုနှိပ်ပါ ၃ လအခမဲ့ကြိုးစားပါ.
ဒီပရိုမိုးရှင်းဟာနာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအဲဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်၊ မင်းမှာစပီကာကောင်းတွေရှိတယ် ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်စျေးကွက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်အရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုသတိပြုမိစေရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့ဂီတ » Amazon Music HD အခမဲ့သုံးလကမ်းလှမ်းချက်သည်ယနေ့တွင်ပြီးဆုံးပြီ
Google Chromecast သို့ပို့သောအကြောင်းအရာကိုကန့်သတ်ရန်
Geekbench မှ Realme GT 5G ၏အသွင်အပြင်အချို့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်